स्वास्थ्यबारे पुस्तक : 'खाना खानुभयो' - रमाइलो नेपाल डट कम| Ramailoo Nepal
You are at:Home»कला/साहित्य»स्वास्थ्यबारे पुस्तक : ‘खाना खानुभयो’
स्वास्थ्यबारे पुस्तक : ‘खाना खानुभयो’
काठमाडौं (अन्नपूर्ण) : पब्लिकेसन्स नेपालयले ‘खाना खानुभयो ? हाम्रा भान्छाबारे बजारका भ्रम’ नामक पुस्तक पाठकसामु ल्याउने भएको छ । स्वास्थ्य सरोकारका विषय लेखिएको पुस्तक जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय चिकित्सक एवं लेखिका अरुणा उप्रेती र लेखक लक्ष्मण अधिकारीको संयुक्त प्रयासमा तयार भएको हो । असार १८ गते पुस्तक सार्वजनिक हुने पब्लिकेसन्सले जनाएको छ । भान्छाबारे बजारले सिर्जना गरेको भ्रममाथि पुस्तक केन्द्रित भएको लेखकद्वयको भनाइ छ ।
खानपिनका फाइदा र बेफाइदाबारे डा.उप्रेती र अधिकारी अपरिचित नाम होइन । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यी दुवै लेखकका लेख, सुझावहरू प्रकाशित हुँदै आएका छन् । युक्रेनबाट डाक्टरी गरेकी उप्रेतीले नेदरल्यान्डबाट महिला विकासमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उप्रेतीले जनस्वास्थ्य विशेषज्ञका रूपमा भारत, श्रीलंका, लाओस, इरान र सुडानमा समेत काम गरिसकेकी छन् ।
‘हाम्रा भान्छामा अहिले पनि भेटिने परम्परागत खान्कीमै पर्याप्त पोषणयुक्त पदार्थ पाइन्छन्’, उप्रेती भन्छिन्, ‘आफूसँग भएका खानपिनलाई बेवास्ता गरेर बजारको लहलहैमा लाग्दा बालबालिकालाई खराब खाना खुवाउन थालेको देखेपछि मैले जनचेतनामूलक लेखहरू लेख्न थालेकी हुँ ।’ लक्ष्मण अधिकारीले लामो समयदेखि स्वास्थ्य र वातावरणलगायत सामाजिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर पत्रकारिता गर्दै आएका छन् । अधिकारी भन्छन्, ‘डा. उप्रेतीसँगको सहकार्यका रूपमा पहिलो पुस्तक तयार पार्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।’
‘खाना खानुभयो ? ‘ पुस्तकले बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइने चिसो तथा ‘शक्तिवद्र्धक’ पेय पदार्थ, जंकफुडका विषयमा विज्ञापनले फैलाएको भ्रमलाई चिर्ने कोसिस गरेको छ । ‘हाम्रै वरपरका उपयोगी सामग्रीको फाइदाहरू राम्ररी खुलासा नगरिँदा उपभोक्ताहरू ठगिँदै छन् भन्ने जानकारी पाएपछि हामीले यस्ता कृतिहरूबारे चासो बढाएका थियौं’, पब्लिकेसन्स नेपालयकी प्रमुख कार्यकारी सैजन मास्के भन्छिन्, ‘आम स्वास्थ्य सरोकारका विषयमा डा. जीवन प्रसाईका दुई पुस्तक प्रकाशित गरेपछि नेपालयले यस कृतिलाई प्रकाशन गर्न लागेको हो ।’